प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् विस्तार ।।
रेडियो धादिङ,धादिङ कात्तीक २ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आईतबार मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नु भएको छ । मन्त्रिपरिषदमा एकीकृत माओवादीका ७, मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिक र बहुजन शक्ति पार्टीबाट एक–एक जना मन्त्री थपिएका हुन् । एमाओवादीबाट सचिव
भागबण्डा गर्न एमाले छलफलमा ।
रेडियो धादिङ, धादिङ असोज २६ । नेकपा एमालेले सरकार जाने मन्त्रीको विषयमा मङ्गलबार थप छलफल गर्ने भएको छ । स्थायी समितिको बैठक बसेर सरकार पठाउने बाँकी मन्त्रीको सूची र मन्त्रालयको भाडबण्डाका विषयमा छलफल गर्ने तयारी गरेको
सानो आकारको मन्त्रिमण्डल आजै !
असोज २५ – नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएसँगै नयाँ सरकारको स्वरुप र त्यसमा सहभागी हुने मन्त्रीका विषयमा चर्चा चल्न थालेको छ । आइतबार एकीकृत नेकपा माओवादी, राप्रपा नेपालसहितका दलको समर्थनमा नेपाली कांग्रेसका
नवनिर्वाचित प्रधानमन्त्री ओलीको सपथ सोमबार १ बजे !
रेडियो धादिङ, धादिङ,असोज २४ । नवनिर्वाचित प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भोलि सोमबार सपथ लिने भएका छन् । सोमबार दिउँसो १ बजे सपथको कार्यक्रम तय गरिएको छ । ओलीले राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव समक्ष पद तथा गोपनियताको सपथ
यस्तो रहेछ सहमती ।
रेडियो धादिङ, धादिङ असोज २४ । प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनमा केपी शर्मा ओलीलाई समर्थन गर्ने बारेमा नेकपा एमाले, एकीकृत माओवादी र मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकबीच आठ बुँदे सहमति भएको छ । सहमति पत्रमा हस्ताक्षर भएसँगै फोरम लोकतान्त्रिक एमाले
३८ औं प्रधानमन्त्रीमा केपी शर्मा ओली ।
रेडियो धादिङ, धादिङ असोज २४ । सङ्घीय गणतन्त्र नेपालको नयाँ संविधान जारी भएपछि नयाँ प्रधानमन्त्रीमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली निर्वाचित हुनुभएको छ । खसेको कुल मतमध्ये ओलीले ३ सय ३८ मत प्राप्त गर्नुभएको सभामुख